Labo Musharax Midkood oo laga yaabo in uu kusoo baxo Doorashada Gudoomiye kuxigeenka 1-aad - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa goordhaw la filayaa in xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho si toos ah uga bilaabato doorashada Gudoomiye kuxigeenada Baarlamaanka 10-aad ee Federaalkka Soomaaliya .
Labo kamid ah Musharaxiinta u taagan Xilka Gudoomiye kuxigeenka koowaad ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si weyn loo saadaalinayaa in midkood kusoo baxo Doorashada, waxaana labadan Musharax oo kasoo jeeda Beesha Reer Awxasan ay yihiin kuwa saameyntooda muuqato.
1-Xildhibaan Faarax Sheekh C/Qaadir: Waxaa xildhibaan si weyn looga dhax bartay Siyaasada afartii sano ee lasoo dhaafay, waxaana Musharaxan taageero badan ka helayaa Kooxda Damul Jadiid oo la rumueesan yahay in Baarlamaanka cusub ay saameyn badan ku leeyihiin.
Doorashada maanta dhaceysa ayaa ah mid ka adag tii shalay lagu dooranayay Gudoomiyaha, waxaana Xildhibaano badan ay kasoo horjeedaan Siyaasada Faaraxa C/Qaadir iyo kooxda uu katirsan yahay ee Damul Jadiid halka kuwa kalana ay taageersan yihiin.
Xildhibaan C/Wali Sheekh Muudey: Xildhibaankan ayaa horey usoo noqday Gudoomiye kuxigeenkii 1-aad ee Baarlamaankii KMG ee Soomaaliya, hada waa Wasiir katirsan Xukuumada Soomaaliya ee waqtigeeda uu dhamaaday.